कसरी बन्द गर्ने? कन्भरेन्जेसन भनेको के हो यसको अर्थ के हो? Tdk - कसरी Writ.Info गर्ने
बन्द कसरी लेख्ने
सही हिज्जेको नजिक पुग्दै
लेख्ने क्रममा हामीले ध्यान दिन सक्ने एउटा नियम हो- ar-er विशेषण क्रिया। विशेषण क्रियापद अलग रूपमा लेख्नुपर्नेछ जबसम्म उनीहरूले एउटा धारा बनाउँदछन्। सब भन्दा साधारण गल्ती मध्येको एक विशेषण क्रियापदको वाक्यांशहरु को गलतफहमीको कारण हो। उदाहरण: अलार्म क्लक अलग्गै लेखिएको हुनुपर्छ, छेउछाउको होईन। किनकि त्यस्ता गल्तीहरू प्रायः गरिन्छ, लिनु अघि स्रोतबाट जानकारी लिनुपर्दछ।
संसारभरि १ 190 ० भन्दा बढी भाषाहरू बोलिएका छन्। र प्रत्येक भाषाको आफ्नै विशेषता सुविधाहरू हुन्छन्। उदाहरण को लागी, तपाईले अ English्ग्रेजीमा लेख्नु भएको शब्द जर्मनमा ठ्याक्कै उत्तर पाउन नसक्ने हुन सक्छ। उदाहरण को लागी, तपाईले लेख्नु भएको अंग्रेजी शब्दको अर्थ "म आफ्नो ठाउँमा छु" अब अर्को भाषामा "म मेरो ठाउँमा छु" भन्ने अर्थ हुन सक्छ। यस कारणका लागि तपाईले यी शब्दहरूको सही मूल्य ध्यानपूर्वक जाँच गर्नु महत्त्वपूर्ण छ।
यसको नजिक हुनुको अर्थ के हो?
कसरी बन्द गर्ने?
नजिक हिज्जे गाईड प्राप्त गर्दै
levazä ± पु